ANDRY 1 : FANDAHARAN’ASA AMIN'NY FANDRINDRANA AN’ABAKABAKA, AN-TANETY, AN-DRANOMASINA
Ny zava-bita momba ny Drafi-paritany
Raha fintinina ny tarehimarika mikasika ny asa vita amin’ny fandrindrana ny Faritra sy ny Kaominina izay navokan’ny *SNAT 2012-2022 dia toa izao :
Isan'ny Kaomina ambanivohitra
Analamanga 0 136 22 16,18%
Bongolava 0 30 0 0,00%
Itasy 1 49 2 4,08%
Vakinakaratra 1 86 3 3,49%
Anosy 1 66 1 1,52%
Androy 1 56 0 0,00%
Atsimo Andrefana 1 117 20 17,09%
Menabe 0 50 3 6,00%
Diana 1 62 15 24,19%
Sava 0 82 0 0,00%
Haute Matsiatra 1 88 0 0,00%
Amoron’i Mania 1 58 0 0,00%
Ihorombe 1 30 0 0,00%
Atsimo Atsinanana 0 96 0 0,00%
Vatovavy Fitovinany 1 144 0 0,00%
Boeny 1 42 31 73,81%
Betsiboka 0 37 0 0,00%
Melaky 1 39 0 0,00%
Sofia 0 113 0 0,00%
Alaotra Mangoro 1 83 1 1,20%
Analanjirofo 0 66 2 3,03%
Antsinanana 0 87 0 0,00%
TOTALINY 13 1617 100 6,18%
*SRAT : Rakitsarim-paritra momba ny fanajariana ny tany.
*SAC : Rakitsarim-panajariana ny tany an'ny Kaominina.
*SNAT : Rakitsarim-pirenena momba ny fanajariana ny tany.
Fivoaran'ny isan'ny SAC vita isan-taona
Taona 2016 2017 2018 2019 2020
Isan'ny *SAC 25 6 0 25 35
ANDRY 2 : FANDAHARAN'ASA FAMPIVOARANA NY ENY AN-DRENIVOHITRA
Asa vita mahakasika ny fitaovana fandrindrana ny eny an-drenivohitra izay mampiasa famatsiam-bola avy ao anatiny
Drafi-panajariana ny tanàn-dehibe akapobeny (PUDi)
Notanterahana tao : Antanànarivo, Toamasina, Antsirabe, Mahajanga, Fianarantsoa, Antsiranana, Ambatondrazaka, Fort Dauphin, Moramanga, Manakara, Antalaha, Ihosy, Ambatolampy, Nosy Be, Sainte Marie, Ankadinondry, Vavantenina, Foulpointe, Ambositra, Morondava, Manjakandriana, Sambava.
Drafi-panajariana ny tanàn-dehibe antsipirihiny (PUDé)
Notanterahana tao : Ehoala, Ivato Q3 et Q4, Vontovorona, lalana mampitohy Ankandimbahoaka, By Pass, Ankorondrano, Andraharo, Masay
Andalam-panatanterahana ny ao : toeram-pitobian-tsolika ao Bongantsara, Andohatapenaka Ivato, Tsarasaotra Ivato, Ambohitrimanjaka Ivato.
Ny zava-bita amin'ny lafiny tetikasa an-tanàn-dehibe miaraka amin'ny famatsiam-bola avy any ivelany
1- Projet Intégré d’Assainissement d’Antananarivo, phase I (PIAA I)
Ny tanjona : Fandraisan’anjara amin’ny fanatsarana ny toe-pahasalamana sy ny ara-tsosialy ho an’ny ambangovangon’ny tanànan’Antanànarivo.
Ny antom-pisian’ny tetikasa : Fanalana ny tsentsina amin’ny tatatra handehanan’ny ranon’orana, fanadiovana ny rano maloto sy ny loto isan-karazany.
Famatsiam-bola: AFD / EU (findramam-bola sy fanampiana)
Ny sarany :
Avy amin’ny AFD : 25 000 000 € (Fampindramana ny 22 000 000 € ary fanampiana kosa ny 3 000 000 €)
Avy amin’ny UE : Fanampiana 3 000 000 €
Lafin-kevitra momba ny asa ;
Lafin-kevitra momba fanadihadiana ;
Lafin-kevitra mitsivalana (miompana amin’ny serasera sy fanentanana) ;
Lafin-kevitra fanamafisana ny fahaiza-manao (rafim-pitantanàna)
2-Tetikasa Lalankely dingana faha-II
Ny tanjona : Fanohizana ny tetikasa Lalankely dingana voalohany sy faha-II izay mikendry ny hanatsarana ny farim-piainan’ny mponina amin’ny tanàna kely.
Ireo famatsiam-bola :
Fampindramana avy amin’ny AFD : 19 tapitrisa €, izany hoe 87%
Fanomezana avy amin’ny UE : 2,4 tapitrisa €, izany hoe 13%
Ny sarany : 21, 84 tapitrisa €
Ny mpisitraka : Mponina miisa 1 700 000 ao anatin’ny Kaominina 27, Boriboritany 4 sy Fokotany 222 ao anatin’ny Kaominina an-drenivohitra Antananarivo.
Ny singa mandrafitra azy :
Fanatanterahana ny foto-drafitrasa sy fampitaovana isan-karazany manodidina ny tanànan’Antanànarivo : toerana hatsakana rano, fisasana sy fanasan-damba, lalan- kely, fametrahan-jiro, toerana natao hoan’ny be sy ny maro, ...
Fanamafisana ny fahaiza-manao ho an’ireo mpiasam-panjakana eny anivon’ny Kaominina sy ny Minisitera.
3-Tetikasa fanamboarana ny raokady Atsinanana sy Avaratra Atsinanana : Lafin- kevitra namolavolana ny "Projet d’Appui au Développement des Abords de la Rocade Est-Nord Est" (PADARNE)
Fandaharan’asa mivelatra amin’ny fampivoarana sy ny fanajariana ny faritra izay mifandray amin’ny tetikasa teo aloha momba ny raokady Avaratra Atsinanana izay manodidina ny 9 km ny refiny.
Ny faritra izay nohajariana sy nampivoarana dia :
Lohasahan’Ambatobe Avaratra ;
Lohasahan’Ambohimangakely Atsinanana ;
Faritra Atsinana eny anivon’ny Kaominina Antanànarivo Renivohitra izay manakaiky ny boulevard de Tokyo.
Tsy ny fijerena fotsiny ireo toerana sasan-tsasany mba hajariana ny tanjon’ny PADARNE fa miaro ihany koa ny fiasan'ny rano amin'ny alalan'ny famerana sy fitehirizana ireo faritra voajanahary.
4- Programme d’Appui et de Développement des Villes d’Équilibre (PADEVE)
Fandaharan’asa ho an’ny tanàn-dehibe somary misitaka izay mikatsaka indrindra ny fanatsarana ny farim-piainan’ny mponina, indrindra ho an’ny tanànan’Antsiranana, Fianarantsoa, Toliara, Antsirabe, Mahajanga ary Toamasina ary amin’ny fomba fiasa mirindra.
Ny mpamatsy vola : Agence Française de Développement (AFD)
Ny sarany : 27 tapitrisa €
Ireo tanjona manokana :
Fanamboarana foto-drafitrasa sy fanomezana tolotra mifanaraka amin’ny fampandrosoana ara-ekonomika, sy fampivoarana ny farim-piainan’ny mponin’Antanànarivo amin’ny alalan’ny fampahafantarana azy ireo ny fandaharan’asa ho amin’ny fampiasam-bola ho an’ny tanan-dehibe ;
Fanamafisana ny fahaiza-manao ara-teknika, sy ny fandraharahana ara-bola amin’ny collectivité décentralisé (vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana) mba hisian’ny fitantanàna mahomby ny asa atao an-drenivohitra sy handrisika azy ireo amin’ny fampitaovana.
Foto-drafitrasa sy fampitaovana isan-karazany ;
Fampitaovana ny mpivarotra ;
Fanavaozana ny PUDi ;
Fanamboarana ny PUDé sy ny fifanarahana- fandaharan’asa ;
Fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny fanohanan’ny fanjakana (RC/AI).
Ny tanàna misitraka izany :
Antsiranana, Fianarantsoa, Toliara : foto-drafitr’asa sy fampitaovana ho an’ny mpivarotra, fandinihana indray ny PUDi, famolavolana indray ny PUDé, fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny fanohanan’ny fanjakana ;
Antsirabe, Mahajanga, Toamasina : fanamafisana ny fahaiza-manao.
Ho an’ny tanànan’Antsiranana, Fianarantsoa, sy Toliara miompana amin’ny fikarakarana ny làlana, ny lakan-drano, ny toerana maintso, sy ny foto-drafitrasa samihafa ary ny fampitaovana mifampitohy amizany (làlana ho an’ny mpandeha tongotra, fanitarana ny famatsian-drano madio, ary toerana hatsakana rano, ary fampitaovana hafa ho an’ny mponina).
5- Projet de Gouvernance Urbaine du Grand Antananarivo (GUGA)
Miisa roa ny singa hita ao amin’ny tanjona manokan’ny tetikasa :
Fanatsarana ny drafitrin’ny tanàna sy ny fananganana sampan-draharaha miandraikitra ny fanatsarana ny tanàna ( Fanomezana 3000 000 €) ;
Fanatsarana ny fahaiza-manaon’ny kaominin’Antananarivo sy ny fampiofanana ny mponina an-tanan-dehibe amin’ny alalan’ny INDDL (Fanomezana 2 000 000 €) ;
Ny mpamatsy vola : AFD
Ny sarany : 5 000 000 €
6- Projet actions et mesures d’accompagnement au renforcement de la résilience des villes (CAT DDO)
Ny tanjona : fampivoarana ny fahaiza-manao ary ny hamafisana ny fitondrana azy mba hifanaraka amin’ ny fiovaovan’ny toetr’andro.
Ny antom-pisian’ny tetikasa : fanamafisana ny tanàna manoloana ny fiovaovan’ny toetr’andro.
Asa fototra :
Fanamboarana sy fametrahana ny drafitra manamafy ny fahaiza-manan’ny DGATE amin’ny fampidirana ny fiovaovan’ny toetr’andro ho ao anatin’ny asany.
Fanamboarana sy fanatanterahana ny drafim-pampiofanana sy fanatsarana ho an’ny mpisehatra mpikatroka ;
Fandinihan’ny DGATE ny amin’ny fametrahana paikady maharitra ho an’ny tanàn- dehibe.
Ny mpamatsy vola : AFD (Fanampiana)
Ny sarany : 1 500 000€
7- Projet de Développement Urbain Intégré et de Résilience (PRODUIR)
Hanatsarana ny fari-mpiainan’ny mponin’an-drenivohitra sy ny mba hampaharitra izany ho an’ mponina izay mipetraka amin’ny toerana tsizarizary eto Antananarivo ;
Hatsaraina ny fahaiza-manaon’ny mpisehatra mba hifanarakka haingana sy am- pahombiazana amin’ny zava-mitranga mila jerena maika sy ny kirizy.
Ny mpamatsy vola : Banque Mondiale
Ny sarany : 75 000 000USD
Vanim-potoana hanatanterahana ny asa : May 2018-Febroary 2023 (5taona).
Mpisitraka mivantana : olona miisa 650 000 ao amin’ny boroboritany izay hanatanterahana ny asa (boriboritany voalohany, fahaefatra ary fahenina eto amin’ny kaominina an- drenivohitra Antananarivo, Kaominina Anosizato Andrefana, Bemasoandro ary Andranonahoatra).
Mpisitraka tsy mivantana : Mponina manodidina an’Antananarivo.
TETIKASA LALAKELY III : Famintinana ireo asa vita tamin’ny taona 2020 (Metatra- ara-kitsy)
Ambohidratrimo 1 075 1 165 6 8 753 813 11 812
Atsimondrano 934 1 359 602 16 969 3 266 23 130
Avaradrano 323 372 80 14 114 1 065 15 954
Renivohitra 13 191 6 338 231 35 052 4 222 59 034
Totaly be 15 523 9 234 919 74 888 9 366 109 930
Fanehoana an-kisary ny “LALAN-KELY” izay natao tamin’ny tetikasa LALANKELY III (Metatra- ara-kitsy)
Tohin’ny tetikasa LALANKELY I sy II ny tetikasa LALANKELY III. Tanjona ny mba hanatsarana ny fiainan’ny mponina amin’ny fanamorana ny fivezivezin’ireo amin’ny toerana misy azy.
Fanehoana an-kisary ny “LALANA” izay natao tamin’ny tetikasa LALANKELY III (Metatra- ara-kitsy)
Tabilao famintinana ireo tetikasa novatsian'ny mpamatsy vola :
Vinavinan'ny saran'ny tetikasa
PADEVE 33 000 000 Euros AFD
PPAB 600 000 Euros UN Habitat
LALANKELY III 21 000 000 Euros AFD
ROCADE 62 800 000 Euros BEI et AFD
GUGA 5 000 000 Euros AFD
PADARNE 1 000 000 Euros AFD
TATOM 3 500 000 USD JICA
PIAA phase I 25 000 000 Euros AFD
PRODUIR 62 000 000 Euros Banque Mondiale
CAT DDO 1 000 000 Euros AFD
Polisin'ny Fanajariana ny Tany : Famintinana ny asa natao 2020
Ny Polisin'ny Fanajariana ny Tany dia rafitra vaovao izay manara-maso ny fandikan-dalàna eo amin'ny lafiny fananganana na ny fanajariana ny tany. Saika niompana manokana tamin'ny Faritra Analamanga teny am-boalohany ny asa saingy kosa natao haparitaka amin'ny sehatra nasionaly izany.
(AIT : Arrêté Interruptif des Travaux)